भाइरल तस्वीरले महिला कर्मचारी मानसिक त'नावमा !
भाइरल तस्वीरले महिला कर्मचारी मानसिक त’नावमा !
उनीहरु सिट रोल (सरकारी कर्मचारीलाई दिइने संकेत नम्बर) को कामले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विदा मागेर गत बिहीबार काठमाडौं आएको खुलेको छ ।बबरमहलस्थित निजामति किताबखानातर्फ जाने क्रममा कसैले पछाडिबाट तस्वीर खिचेको थियो ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वसचिव उपाध्यायले आफूलाई एकजना साथीबाट इनबक्समा सो तस्वीर प्राप्त भएको बताए ।‘मलाई चिनेको साथीले फोटो पठाउनुभयो । सरकारी मोटरसाइकलमा त्यस्तो लुगा लगाएर हिँडेको देख्दा अलि अनौठो लागेर पोष्ट गरेको थिएँ । एकैछिनमा भाइरल भयो,’ उनले भने ।केहीबेरमा उपाध्यायलाई सम्वन्धित व्यक्तिले फोन गरेर तस्वीर हटाउन आग्रह गरेपछि उनले हटाए ।
घरबाट घुम्न जाने हिसाबले निस्केको भएर पोशाकमा ध्यान नपुगेको उनले बताइन् । सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर देख्दा अचम्मित र दुखित बनेको उनको भनाइ छ । ‘तस्वीरमाथि यति धेरै विवाद गरिनु आवश्यक थिएन होला । यसले मलाई निकै मानसिक त’नाव भएको छ । मेरो परिवारलाई पनि अप्ठेरो भएको छ । सोच्दै नसोचेको कुरा भयो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
तर, ती महिलाले गरेको एउटा कमजोरीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि धेरै आक्रमण गर्दा तनाव बढ्न सक्ने कुरामा शर्माको स्वीकारोक्ति छ । यस्तो विषयमा सम्वेदनशीलता अपनाउन शर्माले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तालाई सुझाव दिइन् । उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनीमाथि धेरै नै एट्याक भएको छ, कम्तिमा फोटो खिच्नु अगाडि एकचोटि उनीसँग सहमतिचाहिँ लिनुपर्थ्यो । तर, पनि पब्लिक व्यक्तिले ड्रेसअपमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’